Art is My Life: နားသံသီး ရဲ့ မတ်စေ့ပုံပြင်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:37 PM
အဲလို လုပ်မှာပဲလား......... :-)
မပြောတတ်ဘူးလေ။ ကျွန်တော့်မှာ လက်စွပ်ပေးမဲ့ လူမှ မရှိတာ.
မဆိုးဘူးဗျ.. နားသံသီးက ၀င်ငွေလှည့်ပတ်စီးဆင်းမှု သဘောတရားကို နားလည်ပုံရတယ်။ ဧကနတော့ ဒီလူကို သတင်းထောက်ကြီးက Macroeconomic သင်ပေးထားတယ်နဲ့ တူတယ်။
That's whyalot of poor man are in India. That guy lost another 25Pyas again.
တကယ် ကောင်းတဲ့ အတွေးပဲ..